Vomumusha 'zvaimunetsa huchizadzika – Elen ini “skandalhusen” kuzodzosera kure | Holmbygden.se
Vomumusha 'zvaimunetsa huchizadzika – Elen ini “skandalhusen” kuzodzosera kure
Posted on 16 Kurume, 2014 kubudikidza Holmbygden.se
The boka seri yaida vatizire pekugara regai Benny nevana kudziyisa mvura pamusoro inopisa ndiro mune kuchitonhora furati, ne 70 mita ekisitenjeni netambo wakavhomorwa vavakidzani.
nezita “Aros Energy kuzivisa” mutongi anosiya sezvisingaiti kuti havazokwanisi kukwanisa kudzora dzavo simba. Reality kwakasiyana. svondo rapera akafa kamwe ari kuitika mune zvivako Rinotarisira muna Holm uye mhuri ine vana, pasinei kwechando zvakare, vachirwira magetsi, kudziyisa uye mvura inopisa. Vomumusha 'kutyira pamusoro yaida vatizire pekugara pfuma akawana kuti hwaro hwakanaka.
Mwedzi mitanhatu kubva pakasiyiwa carousel apiwa zvakatanga muna Johan Stendahls akare “skandalhus” ini Holm. nguva ino akanga aronga makumbira kupotera pekugara kune Kutama Board pamwe yakawanda vapoteri pane vanogara yose Anundgård. En oro spred sig Ini byn. Vanhu seri kambani vasina chivimbo pakati veko pashure kusvika gumi kusagona chaiyo vevaGiriki uye litigation navanhu uye mabhizimisi munharaunda. Asylum pekugara, zvisinei, kanenge asati kuva chokwadi, asi vhiki rino rave uchapupu zvakajeka kuti vaigona kutarira zvakafanana kana waivapo. 156 Vapoteri aigona Saka nhasi kunge kwakapa pasina kupisa uye mvura iri Holm – mu midwinter. Aros simba mapasipoti vane akawanda chikwereti kare uye pashure dzinoverengeka vasingabhadharwi mabhiri takasarudza simba kambani E.on kuti chinja kubvisa ' “Skandalhusen”.
Pashure vamwe varimi vaifanira kutama vachibva Holm nemhaka kushungurudzwa, yava chete mhuri kuti akatambura kuramba. svondo rapera, vakanga vasina simba vari mumba make duku panguva Senior Home. mwedzi mitanhatu ichi chete pashure yave pasina simba nokuda sere kwemavhiki muzvinhu vanokodzera.
Kana vane varidzi Senior Home, Vakht uye Bengt Staaf uye Bernt Blomberg, kurongeka kupishinura chando uye gritting muchando. Kunyange zvazvo vari nomutemo kuti azvidavirire nokuda. Vakht uye Bengt Staaf vakashanyira varimi avo chete pashure Krisimasi uye akavimbisa pachedu kufunga zvaizoita kurongwa nekukurumidza. Nhasi, zviri pachena kuti rakanga chete mashoko asina maturo.
Michael Sterner ndiani mumiririri uye shamwari muna Aros Energy kuzivisa nenharo zvino pamusoro E.ON pamusoro nemagetsi mabhiri uye Environmental Office of Foroma kukuvadzwa varimi kurarama nako hazvina kugadziriswa pasinei Murayiro. Panguva iyoyo vari kuedza kuramba kuti vaduku mhuri ringabviswa.
Verenga nyaya uye kuteerera nyaya kubva Holm mu vhiki yapfuura.
12/3 SR – County News: Pasina simba vhiki teerera!
12/3 SR – Afternoon P4 Västernorrland: Hurukuro waVarimi Vakaipa Association teerera!
13/3 SR – County News: Property varidzi chisimbiso cabinet teerera!
13/3 Sweden Radio.se: Magetsi washanduka kure pana Benny muna Anundgård
13/3 iye & rendi: Mhuri nevana pasina magetsi kuti vhiki
13/3 SR – Afternoon P4 Västernorrland: Intervju with E.on teerera!
14/3 iye & rendi: Values ​​anoramba kubhadhara - zvino anopa simba boka kuti simba
Izvi hazvingoitiki itsva pachayo. Aros Energy kuzivisa achiti kuti vaimbova varidzi zvivako zvisina Pari mune kambani. Pasinei Nhoroondo iyi anodzokorora pacharo nguva uye nenguva zvakare pamusoro kwemakore maererano pokuperevedza ari chando shoveling, gritting, aibhadhara magetsi mabhiri uye edza kuti vachengeti kusimuka pamwechete levers siyana.
Previous nyaya iyoyo mhando apo Johan Stendahl, Toboholm, akamira sezvo muridzi Njodzi dzimba
2009 29/4 iye & rendi: Tvångsförvaltning kan rädda barnfamiljer
2009 2/6 iye & rendi: No receivership muna Holm
2009 22/1 iye & rendi: Varimi vari Tobo, hapana chando kubviswa
More Links kuna Aros Energy kuzivisa munhau dzinogona kuwanikwa pano.